Shiinaha soosaarayaasha koofiyadaha Baaskiilka | Chapman
✭ Waxaan sameyn karnaa dhammaan noocyada koofiyadaha koofiyada sida macaamiilku u baahan yahay, oraahda waa la bixin karaa iyada oo ku saleysan sawirka macaamilka ama muunad. qaabkeenna labaduba waa kuwo tayo sare leh oo macquulna ku ah qiimaha.
✭ Qeybtaan balaastigga ah waa qeyb ka mid ah koofiyadda Baaskiilka ee macaamiisha USA. Qaab-dhismeedkan qaab-dhismeedku wuxuu qaadanayaa heerka 'HASCO'. Qalabka Core waa 1.2343 (ESR) bir adag oo adag. Qaab dhismeedka caaryadu waa mid fudud, oo leh afar qaybood oo madaxbanaan. Qalabka wax soo saarka waa wax caag ah PP, oo dusha sare wuxuu u baahan yahay Polish600. Waqtiga bixinta caaryada waa 45 maalmood, iyo wareegga duritaanka waa 37 ilbiriqsi. Qaab dhismeedka caaryadan ayaa ah mid adag, oo leh afar sliders oo waaweyn iyo laba wiish oo waaweyn. Ejection wuxuu qaadanayaa jaakad jilicsan oo lagu daray ka saarid xannibaadda.
✭ Naqshadeynta gaadiidka caaryada ayaa u baahan in si siman loo qeybiyo si loo hubiyo in badeecada si isku mid ah loo qaboojin karo. Ka dhig sheyga inuu gaaro cabir sax ah iyo muuqaal tayo sare leh.
✭ Haddii aad leedahay badeecado la mid ah, fadlan xor ha noo ahaato inaan kuu sameyno caaryaal. Tayadayada iyo adeeggayagu waa kuwa ugu fiican.
Qaab MAYA. CPM-191009
Geedi-socodka Dhammaystirka Dusha sare Polish # 600
Qalabka caaga ah PP
Miisaanka qaybta 300g
Cabbirka qaybta 320mm X 230mm X 210mm
Cabirka caaryada 650 X 600 X 531mm
Magaca caaryada Koofiyadda baaskiilka
Orodyahan Orodyahanka qabow ee barta iridda
Wax caaryada 1.2343ESR / 1.1730 / 1.2767
Qaab Wareega Waqtiga: 37aad
Baaskiilka traumata waa wax aad u badan gaar ahaan dhibaatooyinka neerfaha ayaa keena naafonimo iyo dhimasho dhammaan heerarka nolosha. Dib-u-eegiddani waxay soo uruurineysaa natiijooyinka ugu dambeeyay ee ku saabsan cilmi-baarista goobta traumata baaskiilka oo ay weheliso qodobka isticmaalka koofiyada baaskiilka. Aagga cilmi-baarista dhaawacyada baaskiilku waa dabiiciyan maadooyin kala duwan oo khuseeya dhakhaatiirta oo keliya laakiin sidoo kale khubarada leh hawlaha waxbarashada, injineernimada, garsoorka, dhaqan celinta ama caafimaadka bulshada. Tirada badan ee daabacaadda caalamiga ah iyo maadooyinka gaarka ah awgeed, dib u eegista waqtiga gaaban waxay gacan ka geysaneysaa ogaanshaha jihooyinka cilmi-baarista ee dhowaanahan iyo sidoo kale waxay macluumaad ka siisaa edbinta deriska ee cilmi baarayaasha. Waa la sheegi karaa ilaa maanta, inkasta oo tiro aad u badan oo cilmi baaris ah lagu sameeyay aaggan inbadan oo daraasado ah ayaa loobaahanyahay si loo qiimeeyo loona hagaajiyo xaaladaha gaarka ah iyo baahiyaha kajira gobolada, da, da, jinsiyadaha kala duwan iyo in la abuuro barnaamijyo kahortag ah oo madax adag iyo dhaawacyo waji ah inta aad baaskiil wado.
Sawir: Sida koofiyadu u badbaadiso noloshaada: Markaad madaxaaga garaacdo, qolofka adag ee adag (madow) wuxuu ku fidaa saameynta aag ballaaran. Dhamaan khafiifka hoose ee jilicsan (oranji) ka dib wuxuu u nuugaa tamarta si siman sidaa darteed (waxaan rajeynayaa) inuu jiro dhaawac ugu yar madaxaaga.Koofiyadda la'aanteed, saameynta oo dhan waxay ku urursan tahay qayb yar oo ka mid ah madaxaaga, taasoo u eg inay jabto dhakadaada oo aad waxyeello u geysato maskaxdaada sidoo kale.
Araga hore, koofiyad wareeg ah waxay umuuqataa koofiyadaha kale oo kale, laakiin fiiri si dhow waxaadna arki doontaa fikir badan oo dheeri ah iyo sayniska oo galay naqshada. Koofiyadda caadiga ah waxay leedahay laba qaybood oo waaweyn: qolof adag oo adag iyo gogol jilicsan oo gudaha ah. Qolofta adag ayaa loogu talagalay inay ku faafiso xoogga saameynta aag ballaaran sidaa darteed dhakadaadu waxay u dhowdahay inay jabto, halka safka jilicsan loola jeedo inuu isku ururiyo gudaha gudaha isla markaana uu soo nuugo saameynta tamarta, sidaas darteed wax ka yar ayaa loo gudbiyaa madaxaaga.
Dadku waxay u maleynayeen koofiyadaha baaskiilku inay yihiin kuwa aan qabow lahayn, laakiin intaas oo dhan ayaa isbeddelay hadda. Ma heli doontid wax xirfadle ah oo baaskiil ku ordaya waddada ama waddo aan koofiyad si adag madaxa loogu laadin. Koofiyadaha ayaa aad uga fiican sidii ay ahaan jireen. Miyaad ogaatay sida baaskiillada baaskiil ee qabow ay ugu muuqdaan koofiyadaha u eg jeex jeex jeexjeexa? Ku dhowaad dhammaan koofiyadaha wareegga casriga ahi si yaab leh ayey u rogmadaan waxayna xitaa ka dhigi karaan xitaa kuwa ugu gaabiska ah ee wadayaashu inay gooyaan qashin. Hal erey oo digniin ah, in kastoo. Qof kastaa wuxuu rabaa inuu muuqdo mid wanaagsan, laakiin xusuusnow in koofiyadda meertada ay ugu horreyn ku saabsan tahay ilaalin. Fussy, siyaado dheeri ah ayaa badanaa suuq geyn galiya — marka ha ku khasaarin lacagtaada.
Hore: Qaybaha Gawaarida
Xiga: Miirayaasha saliida